Kungani Uthenga I-Headlamp? - Liveolight.com
Kungani Kufanele Uthole I-Headpack?
I-7Color 10W engakwazi ukuvuselelwa Isimo sezulu se-Garden Deco-lantern Isikhulumi esingenantambo
♥ 12pcs RGB LED, 0.18W / pc, ukukhishwa kwe-2.2W okukhanya./li> ♥ 2200mAh3.7V Ibhethri ye-Li-ion ngaphakathi. ♥ 10W sezulu ubufakazi. ♥ 5h Isikhathi sokudlala komsindo. I-7Color 10W engakwazi ukuvuselelwa Isimo sezulu se-Garden Deco-lantern Isikhulumi esingenantambo ...
I-Half Sphere entsha Ukusebenzisa i-3 * Aaa amabhethri Magnet Bottom 160lm I-Multi Fitting Camp Lantern for Camp
♥ Usebenzisa i-6 * 5730 emhlophe + 1 * i-5730 ebomvu, enezikhwama eziphezulu ezifika ku-160 izibani. ♥ Cindezela inkinobho ye-tailcap ukuze uthole amazinga okukhanya kwe-2 ne-Flash mode. ♥ Ungabuyiselwa futhi unomile ...
Isithethi se-bluetooth engenayo wireless stereo engenayo
Izici zeMkhiqizo: I-1) Inombolo yombhalo: I-SCB-1510 2) I-Material: I-Aluminium Alloy I-Silicon Insimbi Ye-Rubber Steel I-Meshes 3) I-Finishing Surface: I-Silver Sandblasting Silver Sandblasting Insimbi Yokupenda I-4) SMD2835 * 8pcs 5) 18650 / 2200mAh Lithium Battery ...
I-Aluminium Mini 1AAA Ibhethri Ukukhanya kwe-Flashlight nge-Keychain
♥ Gweba ikhanda ukuze usondise kusuka ekunqandeni ukugxila kuphela ngesandla esisodwa. ♥ Usebenzisa i-CREE MLE LED, enesisindo esiphezulu kuze kufike ku-35 lumens. ♥ Kunikwe amandla yi ...
Wonke umuntu ungitshele ukuthi akadingi i-headlamp.
I-flashlight yanele ukuba asebenze ebusuku.
Kodwa-ke, ngifuna ukukutshela i-headlamp iningi elisebenzisayo, hhayi kuphela ukukhanya okujwayelekile.
Amandla mahhala- ikhono lokusebenzisa izandla zombili kuyinzuzo enkulu phezu kwe-flashlight, mhlawumbe ucabanga ukuthi i-headlamp ingakuvumela ukuthi uphumelele lapho izandla zakho kufanele zenze noma yini ebusuku, isibonelo njengokukhuphuka, izandla mahhala kubalulekile, akunakwenzeka sebenzisa izandla zakho uma ukhuphuka.
Ngisho nxazonke zenkampu lapho i-lantern ingahlinzeka khona ukukhanyisa okungekho izandla, ikhono lokuqondisa kalula ukukhanya okungaphezulu noma ngabe ngabe ungathanda, ngokufaka ikhanda lakho kuphela, kuyinzuzo.
Isisindo esincane futhi esincane - kulula ukuvumelanisa epakethe lakho, futhi okuncane kakhulu kunesisindo esingaphezu kwesisodwa.
Ngakho, lapho uhamba, ugibela futhi ugijima. Ungakhetha kanjani?
I-headlamp, Usizo olukhulu lapho Izinto zihamba kabi.